"Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala." Efesiana 5:1
"Fantany tsara fa efa niaraka tamin’i Jesosy izy roa lahy." Asan’ny Apostoly 4:13
"Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany." 1 Petera 2:21
Tamin’io maraina io i Ravo dia nihazakazaka namakivaky ny efitrano malalaky ny gara, satria maika hanenjika fiarandalamby, sao tara. Voadonany, teo amin’ny sisindalamby, ity zazalahy kely iray nitazona kilalao piozila mbola vaovao, ka niparitaka tamin’ny tany ireo singa marobe. Nony nahita ilay ankizy nitomany izy, dia nisalasala, tsy sahy nisento fa nanampy azy nitsimpona ireo singa rehetra. Nandinika azy tsara ilay zaza. Rehefa voangon’izy ireo izany, dia somary natahotra izy nijery ity lehilahy tsy fantany, ary niahotrahotra nanontany azy hoe: “Hono hoy aho, tompoko, Ianao ve no Jesosy?”.
Tonga saina i Ravo tamin’io fotoana io, fa na dia tsy nahatratra ny lamasinina azy izy noho ny zava-nitranga, dia nanjary toy ny taratr’i Jesosy.
Ry kristiana namana, isika koa ve isanandro tsy tokony hanandrana haka tahaka ny Tompontsika? Ny hoe vavolombelon’i Jesosy Kristy, dia tsy vitan’ny miresaka momba Azy sy manao asa mampitolagaga amin’ny anarany fotsiny, fa indrindra maneho eo amin’ny fiainantsika ireo toetran’i Jesosy, dia fahitsiana, hamoram-po, fanetrentena, fangorahana. Izy mihitsy no miteny amintsika hoe: “Mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho” (Matio 11:29). Tahaka Azy, dia aoka isika hanokana fotoana hitodihana amin’ny ankizy, hampitony sy hampionona azy ireo, ary hampahafantatra azy ireo ny fitiavan’i Jesosy. Aoka isika haka tahaka ny Mpampianatra antsika, Izay miteny hoe: “Mitandrema, fandrao manao tsinontsinona na dia ny iray aza amin’ireny madinika ireny ianareo” (Matio 18:10).